FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA MPIAMBINA BELZA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana mpiambina belza
Indy mpiandry ondry Belzika
Lisitry ny alika mpiompy belza mifangaro
Groenendael mpiandry ondry belza
Ny vatan'ny Sheepdog Belzika dia vozongo tsara, miaraka amin'ny hoditra tery ary vatan-tsivalana mifanitsy. Ny haben'ny loha amin'ny ankapobeny dia tokony hitovy amin'ny vatana. Ny tampon-karandohany kosa dia velarina fa tsy boribory. Ny molotra dia tendrena antonony miaraka amin'ny fijanonana antonony. Tokony ho tery ny molotra. Ny kaikitry ny alika dia tokony ho lava na hety. Ny maso salantsalany, miendrika amandy dia volontsôkôlà. Ny sofina miorina dia telozoro ny endrika ary mitovy amin'ny loha. Ny tongotra dia mirazotra, mahitsy ary mahery. Ny rambony volom-borona dia matanjaka amin'ny fotony ary ny taolana dia tonga amin'ny hock. Esorina matetika ireo lalandara. Toy ny saka ny endrin'ny tongotra. Ny palitao mahatohitra toetr'andro dia somary lava, miaraka amina volony amin'ny tendany ary misy volom-borona fanampiny amin'ny tongony, rambony ary eo ambanin'ny vatana. Ny lokon'ny palitao dia mainty, na matevina na misy fotsy kely eo amin'ny tratra, saokany na rantsan-tongotra.
Ny mpiandry ondry belza / groenendael no be mpitia indrindra amin'ireo mpiandry ondry efatra belza. Alika tena mamirapiratra sy mpankato izy io, tapa-kevitra sy mandinika miaraka amina toetra voaaro sy fiarovana mafy amin'ny faritra. Mila be dia be ity karazany ity -piaraha-monina , kokoa hatramin'ny fahazazany, mba hisorohana azy tsy ho saro-kenatra na mora tohina. Ny mpiandry ondry belza dia mila tompo efa za-draharaha izay hentitra, nefa tsy be tanana. Raha masiaka ianao na mahery setra dia ho lasa tsy miara-miasa izy ireo. Ny tompony dia mila mampiseho fahatokisana, fahefana voajanahary amin'ny alika. Fitsipika mifanaraka tsy maintsy apetraka ary atao mazava. Fiarovana voajanahary ity karazany ity ka tokony hampiofanina sy hifaneraserana tsara hatramin'ny fahazazany. Ny alika kely dia tokony hampifandraisina hatrany am-bohoka. Tsara amin'ny fankatoavana ny asa sy ny fifaninanana. Ireo alika ireo dia manao polisy tsara amboa mpiambina . Ity karazana asa ity no asan'izy ireo voalohany. Na izany aza, manao biby fiompy tena tsara izy ireo raha manana tompona afaka manohitra ny sainy amin'ny fisian'ny fitarihana. Izy ireo dia mailo hatrany, mailo ary tsy mivadika. Sheepdog belza dia tsara amin'ny ankizy raha mifanerasera tsara amin'izy ireo. Ity karazana ity dia mila tafiditra ao amin'ny fianakaviana fa tsy hihidy ao anaty tranon-kenna. Mila fitarihana izy ireo, fanatanjahan-tena isan'andro miaraka amin'ny fiofanana sy ny fiarahana, satria raha tsy misy izany dia mety manjary manimba ary sarotra tantanana. Ny Shepherd Belzika dia angovo avo, manana fahaiza-manao avo, ary mora takarina. Mila asa hatao izy ireo, indrindra raha mifanerasera amin'ny tsipika fiasa ianao. Mitandrema rehefa mampiditra an'ity alika ity amin'ny biby fiompy tsy kaninina kely . Mety hanjakazaka amin'ny alika hafa izy ireo ary mila tompona afaka mifampiresaka amin'ilay alika fa fitondran-tena tsy ilaina ny manjaka. Raha mifanerasera tsara amin'ny saka sy biby hafa izy ireo, dia tsy tokony hisy olana izany. Ity Sheepdog belza ity dia mety aseho amin'ny fomba voajanahary fiompiana fiompiana toy ny fanenjehana sy ny fihodinana, ny fivezivezena mandritry ny ora maro ary ny fikitikitihana ny voditongotry ny olona. Tsy maintsy ampianarina izy ireo mba tsy hanao izany amin'ny olona. Alika tena mitaky be mpitia ity izay miha malaza. Mila tompona efa za-draharaha satria mora sarotra ny mifehy raha tsy hain'ny tompony ny mitantana azy. Ny fomba itondran'ny tompony ny alika dia mety hiteraka fahasamihafana lehibe amin'ny toetrany sy masiaka . Miresaha amin'ny olona za-draharaha amin'ny karazany alohan'ny ividiananao ny alikanao. Matetika ireo alika ireo dia manaitra, aza miorina amin'ny firaketana ny zava-bita sy ny fisehoanao fotsiny. Alao fotsiny ity karazana alika ity raha azonao tsara ny dikan'ny atao hoe Alfa .
Ity karazana mafy orina sy salama ity dia tsy manana olana ara-pahasalamana lehibe. Ny ahiahy kely sasany izay efa hita dia ny androbe, ny aretin-koditra, ny olan'ny maso, ny mahamenatra be loatra, ny halozàna tafahoatra ary indraindray ny tavy andilan-tratra sy ny tavy sika. Aza atao be loatra ny fampinonoana an'io karazany io, satria manana fironana hanjary matavy loatra sy kamo.
Ny mpiandry belza / Groenendael dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Izy io dia mavitrika mavitrika ao an-trano ary hahavita tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny. Afaka matory eny ivelany ny Groenendael, na dia aleony miaraka amin'ny olony.
Ny Belgian Shepherd / Groenendael dia manana lava, mahitsy, salantsalany lava, akanjo ivelany mavesatra ary akanjo lava matevina izay mitaky fikorohana sy fikosehana isan'andro. Ny fikarakarana fanampiny dia tokony homena rehefa alika ny alika. Atsaharo ny tsihy miforona, indrindra amin'ny ruff sy amin'ny tongotra, ary volo manaparitaka eo anelanelan'ny rantsantongony sy amin'ny sofina ivelany. Ity karazana ity dia mpitrandraka mavesatra vanim-potoana, mandatsa indroa isan-taona miaraka amin'ny fandatsahana fanampiny mandritra ny taona.
Ny Groenendael Belzika, araka ny iantsoana azy manerantany, dia antsoina fotsiny hoe Belgian Shepherd avy amin'ny American Kennel Club. Nomena ny anarany avy amin'ny tanàna Groenendael any Belzika. Izy io dia iray amin'ireo karazana efatra amin'ny zanak'ondry belza, ny Groenendael Belzika, Malisiana Belzika , Tervuren Belzika , ary ireo tsy dia malaza loatra Laekenois belza , izay mizara fototra iraisana. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena sy klioban'ny fiompiana ny alika efatra dia heverina ho karazany iray ihany miaraka amin'ny karazany maro karazana amin'ny karazana palitao. Ny alika efatra dia mizara fari-pahaizana amin'ny firenena rehetra ankoatry ny AKC, izay nanomboka tamin'ny 1959 dia manaiky azy ireo ho karazany misaraka ary tsy manaiky ny iray amin'ireo efatra (ny Laekenois ), fa ny UKC, izay rezistra amerikana koa, dia manaiky ny karazany efatra ho karazany iray. Miovaova sy mahira-tsaina tokoa, ny karazany efatra amin'ny domba Belza dia miavaka amin'ny talenta isan-karazany, ao anatin'izany fa tsy voafetra ho azy, ny asan'ny polisy toy ny, ny zava-mahadomelina sy ny fikarohana ny baomba, ny fiarovana ary ny Schutzhund, ny fikarohana sy ny famonjena, ary koa ny fankatoavana, ny hakingana, ny fanarahana, fiompiana, sled ary fisarihana sarety ary ho torolàlana ho an'ireo jamba sy mpanampy ireo sembana. Ireto alika avo lenta ireto ary tena marani-tsaina dia mila fitarihana, mila fanamby ary ampiasaina isan'andro ary noho izany tsy natao ho an'ny rehetra, fa afaka manao namana akaiky fianakaviana amin'ny tompony marina. Ny Malisiana Belzika no voalohany amin'ireo mpiandry ondry efatra nametraka karazana. Mandra-pananganana ny efatra hafa amin'ny karazany dia nantsoina hoe 'Berger Belge a poil court autre que Malinois,' izay midika hoe 'Sheepdog mifono volo Belza izay tsy Malinesia.' Ankehitriny, ny vala efatra dia malaza any Belzika, miaraka amin'ny Laekenois sy Malinois izay matetika ampiasaina ho alika karazana miasa noho ny Belzika Groenendael sy Tervuren fa ny karazana rehetra dia mbola mahatonga mpiasa tena mahay ihany.
Indy ilay Groenendaeler
Indy ilay Groenendaeler ho alika kely
Aris ilay Groenendael Belzika 2 volana from avy any Greece
'Ity no Sheepdog Belzika, Indiana Jones an'i Wildland. Teraka tamin'ny 23 Oktobra 19 Indiana i Indiana ary nodimandry tamin'ny 16 Aogositra 2007. Tsy afaka nangataka namana tsara kokoa aho. Tena marani-tsaina izy, ary nanana vazivazy nahafinaritra. Milalao, sariaka ary manam-paharetana i Indiana dia hanamboatra ny lalao ho azy hilalao amiko. Nifaninana izy ary nitondra ny lohateny hoe Schutzhund, Obedience, Tracking, Agility ary Herding. Notondroina tany Etazonia sy Kanada izy talohan'ny namoronany ny pyometria ary nandrora. Izy koa dia Dog Therapy voamarina, nahazo ny mari-pahaizana momba ny Temperament Test sy ny CGC. Nandalo fitsapana fanesoana Water Dog Excellence ihany koa izy izay natao ho an'ny Newfies. Nomena ny loka Jet of Merit for Heroism i Indiana rehefa namonjy ahy tamin'ny mpanafika iray izy. '
'Nahagaga ity alika ity. Rehefa nampianatra ny fihetsiny aho dia nanandrana foana fa tsy hiala mihitsy. Tiany tokoa mandeha mitsangatsangana miaraka amiko any amin'ny valan-javaboary, manenjika an'i Frisbees sy milomano. Mpilomano mahafinaritra be izy. Azoko nolazaina azy nijanona raha mbola tao anaty rano izahay ary nanipy ny kilalaony. Naka azy io araka ny baiko izy, ary rehefa tonga ny antsasaky ny fiverenany, dia nasaiko nandry izy. Tadidio fa teo ambonin'ny lohany ity rano ity, koa ahoana no fomba fatoriany? Ela kely fotsiny izy no mivoy fo mba hijanonany eny ambony rano. Rehefa notereniko izy ho avy dia nilomano izy ary nanatrika teo alohako ary avy eo nivoy lakana fotsiny mba hijanonany ambony ambony. '
'Satria nifaninana tamin'ny toerana samy hafa amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny alika izahay, dia nanao fiofanana be dia be ary mino aho fa izany no nahatonga azy nandanjalanja tsara. Tsy tadidiko fa tsy voafehy izy ary tsy ketraka amin'ny fihetsem-po. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny mpiandry ondry Belzika
Belzika mpiandry ondry sary 1
Sary mpiandry ondry Belzika 2
Sary mpiandry ondry Belzika 3
inona no havanese voaharo
Mini poodle mpiandry ondry Aostraliana Mix
shar pei sy husky mix
mpampijaly amerikana afangaro amin'ny bulldog